Ny Minisitry ny fizahan-tany Saodiana dia nanakarama vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany, Gloria Guevara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny Minisitry ny fizahan-tany Saodiana dia nanakarama vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany, Gloria Guevara
Associations News • Awards • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Enga anie 21, 2021
Ny ankamaroan'izao tontolo izao dia sahirana mitazona ny fizahan-tany amin'ny asa aman-draharaha, raha Arabia Saodita kosa dia manangona vola an-jatony tapitrisa hametraka ny Fanjakana ho ivon-toerana manerantany amin'ity sehatra ity. Ny fandraisana ny vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany, ny talen'ny WTTC Gloria Guevara ho mpanolotsaina ny minisitra dia mampiseho fa matotra ny firenena, ary mazava ny fikasana.
Gloria Guevara dia minisitry ny fizahan-tany tany Mexico, lasa CEO ny World Travel and Tourism Council (WTTC), ary izao dia hifindra any Arabia Saodita hanoro hevitra ny minisitry ny fizahantany ao amin'ny fanjakana, HE Ahmed Al Khateeb.
Mila fanitsiana ny fahitana ny zon'olombelona, ​​ny fitoviana ary ny fisokafana i Arabia Saodita ary ny fanakaramana an-dRamatoa Guevara dia mety haneho fahavononany hianatra sy hiova.
Saudi Arabia dia lasa ivon'ny fizahan-tany manerantany miaraka amin'ireo biraom-paritra ataon'ny UNWTO, WTTC, Global Resilience and Crisis Center, ary ny hafa mety hanaraka azy avy eo.
World Travel and Tourism Council (WTTC) Ny CEO CEO Gloria Guevara dia namarana ny fihaonana an-tampony voalohany indrindra nandritra ny valanaretina COVID tany amin'ny tanindrazany, Mexico, any Cancun. I Saudi Arabia dia nitana andraikitra lehibe tamin'ity fihaonana an-tampony ity nitondra delegasiona marobe anisan'izany ny minisitry ny fizahan-tany an'ny Fanjakana, ny Excellency Ahmed Al Khateeb.
Noraisina ho toy ny VIP ny minisitra. Nahazo fankatoavana marobe avy amin'ny CEO WTTC izy. Ankehitriny dia mahazo ny mari-pankasitrahana avy amin'ny minisitry ny Saodiana i Gloria Guevara.
Cancun no toerana nanombohan'ny tsaho momba an'i Guevara mieritreritra ny hamela ny andraikiny ho vehivavy matanjaka indrindra amin'ny fizahan-tany amin'ny maha CEO ny WTTC ho mpanolo-tsaina ny minisitry ny Saudi Arabia. Gloria tamin'ny ora voalaza eTurboNews:
Tsaho - tsy azo antoka ny loharano - Fa tsaho fotsiny!
Ny tsaho anefa dia nanjary zava-nisy rehefa nandray azy tao amin'ny ekipany ny minisitry ny fizahantany saodiana omaly.
Ho tonga ny fiarahabana. Nilaza ny Tale jeneralin'ny World Travel and Tourism Council voalohany eTurboNews amin'izao fotoana izao:
“Anjara asa mahafinaritra iray hafa ho an'ny namako Gloria Guevara…. Tsy ny filoham-pirenena vehivavy voalohany an'ny WTTC ihany fa ny toerana avo indrindra ao amin'ny toerana misongadina amin'ny maha-fizahantany kintana kintana tamin'ny taonjato faha-21. Ary fahitana mahafinaritra avy any Arabia Saodita. Manantena ny hitohizan'ny fifandraisanay matanjaka hampandroso ny dia mahaliana amin'ny toetrandro miaraka amin'i Saudi Arabia ho mpamily hetsika vaovao manerantany, "hoy ny Profesora Geoffrey Lipman, filoham-pirenena SUNx Malta
Cuthbert Ncube, Ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia nilaza hoe: “Wow, mahafinaritra izany. Ny birao fizahantany afrikana dia manantena ny hiara-hiasa amin'i Gloria sy ny fanjakan'i Saudi Arabia. Saudi Arabia dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizahan-tany maneran-tany sy ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerana an'i Afrika. ”
Juergen Steinmetz, chairman, sady mpanorina ny World Tourism Network, nanampy hoe: “Tsy nahagaga raha nitsara ny zavatra hitako tany Cancun izany. Amin'ny anaran'ny World Tour Network dia tiako ny miarahaba an'i Gloria Guevara noho ny andraikitra vaovao lehibe nanendrena azy. Ny toko WTN anay sy ny vondrona liana any Arabia Saodita tarihin'ny fitarihan'ny HRH Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud sy Andriamatoa Raed Habbis dia nihetsika hatramin'ny nanombohanay ny dinidinika momba ny fananganana.travel.
“Ho an'i Arabia Saodita hanendry an-dRamatoa Guevara ho mpanolotsaina ny minisitra dia mampiseho ny fikasan'ny fanjakana hiantoka ny andraikiny vaovao manerantany amin'ny maha mpanaingo fizahan-tany sy mpitarika azy. Izy io koa dia mampiseho ny fikasan'ny fanjakana amin'ny fandeferana, ny fitoviana ary ny fitarihana.
“Nanao ny visa fizahantany ho an'ny tsy Silamo i Arabia Saodita talohan'ny nipoahan'ny COVID-19. Ankehitriny dia ho sambany handray ny mpizahatany iraisam-pirenena io fanjakana io. Nandalo ny areti-mandringana i Saudi Arabia nandany vola an-jatony tapitrisa hananganana fotodrafitrasa sy hiomanana amin'ny mpitsidika. Saudi Arabia dia manana fahitana mazava, ary ny fotoana ahafahan'ny namantsika Gloria hanana andraikitra amin'ny fanaovana io vina io ho zava-misy. Arahabaina. ”
Ny teny manetriketrika nataon'i Gloria dia mamintina ny zava-drehetra: “Te hanampy an'io fanasitranana manerantany i Saudí ary nangataka ahy hanampy amin'izany. Mazava ny famoahana gazety.
Ity ny fanambarana an-gazety voalohany:
Ny Minisiteran'ny Fizahan-tany any Arabia Saodita dia nanambara ny fanendrena an'i Gloria Guevera Manzo, CEO farany an'ny World Travel and Tourism Council (WTTC), ho amin'ny toeran'ny Lehiben'ny mpanolotsaina manokana.
Amin'ny maha mpanolotsaina manokana an'ny Minisitry ny fizahantany azy, Gloria dia handray traikefa an-tsehatra ho an'ny fizahan-tany ho an'ny daholobe sy tsy miankina mandritra ny 25 taona mba hanamora ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, hampivelatra ny vatan'olombelona ary handray anjara amin'ny fanatanterahana ny fampiasam-bolan'ny fizahan-tany be zotom-po ataon'ny Fanjakana. Fahitana 2030.
Nankasitraka ny fotoana nanendrena azy ny Lehibeny Ahmed Al Khateeb, tamin'ny filazany fa: "Ny indostrian'ny fizahantany ao Saudi Arabia dia manana fahaiza-manao mahatalanjona ary efa manohana ny fitomboana ara-toekarena sy ny famoronana asa manerana ny Fanjakana, mifanaraka amin'ny Vision 2030 sy ny fitarihan'ny mpanjaka HM King Salman sy HRH the Prince Prince.
“Manana lova nasionaly matanjaka sy tantara tsy manam-paharoa an'arivony hotantaraina isika. Gloria dia mitondra fahaizana iraisam-pirenena sy tambajotra iraisam-pirenena goavambe avy amin'ny fotoanany nisolo tena ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany amin'ny maha CEO ny WTTC ary traikefa mivantana amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny fizahan-tany vao manomboka tamin'ny fotoan'nny sekreteran'ny fizahan-tany any Mexico, izay hanampy antsika lehibe -mampiakatra avo lenta ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany. "
Gloria Guevara Manzo nilaza hoe: “Te ho anisan'ny fanovana aho ary hanao ny vinan'i Saudi Arabia ho toerana fizahan-tany fizahan-tany ho zava-misy. Ny fizahantany no sehatra manome toky indrindra any Arabia Saodita; hita izany hatramin'ny taona 2019 rehefa nisokatra voalohany ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena ny Fanjakana ary nanjary mpandray anjara haingana indrindra amin'ny Travel sy fizahan-tany amin'ny sehatra manerantany *.
"Tamin'ny taona 2020, ny mpitondra Saodiana dia nanao asa mahatalanjona nitantana ny krizy COVID-19 ary nanangana ny fizahan-tany anatiny raha mbola manohy miaro ny fampiroboroboana ny indostria manerantany sy ny fanarenana, ary matoky aho fa ny fahaizako efa an-taonany maro dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny manaraka dingana fampandrosoana ", hoy hatrany izy.
"Maherin'ny 50% ny mpiasa eran-tany amin'ny fizahantany sy fizahan-tany dia vehivavy ary i Arabia Saodita dia manangona haingana ny fampidirana vehivavy, noho izany manantena ihany koa aho fa ny fanendrena ahy dia hanome hery vehivavy Saodiana maro hanaraka asa amin'ny fizahan-tany, hiandrandra ny toeran'ny mpitarika ary fenoy ny tanjaky ny vehivavy hanomezana hery 2030, ”hoy i Gloria nanampy.
Arabia Saodita dia nahavita fandrosoana haingana tamin'ny indostria vao teraka; mandray andraikitra lehibe amin'ny famelomana indray ny sehatry ny fizahantany aorian'ny COVID-19 tamin'ny alàlan'ny fiadidian'ny G20, izay nahazo fampanantenana iraisana avy amin'ireo firenena mpandray anjara mba hiara-hiasa amin'ny fampivoarana traikefa fizahan-tany maharitra sy tena izy; namoaka visa fizahan-tany 400,000 mahery tao anatin'ny enim-bolana voalohany hatramin'ny nanombohana ny rafitry ny visa vaovao ho an'ny fizahan-tany amin'ny volana septambra 2019 ary nanangana tahiry fizahan-tany SAR400 miliara sy programa mpiara-miombon'antoka fizahan-tany SAR2 miliara.
Ny Minisiteran'ny fizahantany dia mitarika ny fivoaran'ny sehatra ho amin'ny tanjona 2030 amin'ny fampitomboana ny anjara birikin'ny fizahan-tany ho an'ny harinkarena faobe azo avy amin'ny 3% ka hatramin'ny 10%, mamorona asa iray tapitrisa fanampiny ho an'ireo teratany Saodiana ary mampitombo ny isan'ny mpitsidika hatramin'ny 100 amin'ny 2030.
Minisiteran'ny fizahantany any Arabia Saodita
Ny minisiteran'ny fizahan-tany Saudi Arabia dia mitarika ny tontolon'ny fizahantany Saodiana, miaraka amin'ny fanohanan'ny Fahefana fizahan-tany Saodiana sy ny Tahiry fampandrosoana fizahantany.
Ny Minisitera dia mametraka ny paikadim-bolan'ny fizahan-tany an'ny Fanjakana ary tompon'andraikitra amin'ny fampivelarana ny politika sy ny fitsipika, ny fampiroboroboana ny vatan'olombelona, ​​ny fanangonana statistika ary ny fisintomana ny fampiasam-bola. Izy io dia miara-miasa amin'ny Saudi Tourism Authority, izay mampiroborobo an'i Saudi Arabia ho toerana fizahan-tany manerantany, ary ny Fund Development Development Fund, izay manatanteraka ny paikadim-bola fampiasam-bola ataon'ny Ministera amin'ny fanomezana famatsiam-bola ho an'ny fampandrosoana ny sehatra.
Notarihin'Andriamatoa Ahmed Al Khateeb, natsangana ny ministera tamin'ny volana febrily 2020, taorian'ny nanokafana an'i Saudi Arabia ho an'ireo mpizahatany fialamboly iraisampirenena voalohany tamin'ny tantarany tamin'ny taona 2019. kendrena Saudi Arabia ny hitsena ireo fizahan-tany fizahan-tany 100 tapitrisa amin'ny 2030, mampitombo ny ny fandraisan'anjaran'ny sehatra ho an'ny harinkarena faobe 3% ka hatramin'ny 10%.
Momba an'i Gloria Guevara Manzo
Gloria Guevara Manzo dia iray amin'ireo vehivavy manan-kery indrindra amin'ny fizahan-tany. Izy dia talen'ny talen'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) nanomboka ny volana aogositra 2017 ka hatramin'ny aprily 2021, nisolo tena ny tombontsoan'ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahantany & fizahan-tany manerantany ary mitarika ny fandrindrana ny governemanta sy ny indostria ary ny fiaraha-miasa hamokarana ny politika sy fandraisana andraikitra tsara indrindra amin'ny famoronana asa. , fampihenana ny fahantrana ary fiverenana ara-bola any amin'ny toerana itodiana sy firenena. Gloria dia sekretera ny fizahan-tany ho an'i Mexico nanomboka ny volana martsa 2010 ka hatramin'ny novambra 2012, nitarika ny sehatry ny fizahan-tany any Mexico tamin'ny alàlan'ny krizy telo heny amin'ny H1N1, ny olana ara-bola sy ny olana ara-piarovana, nanova ny indostrian'ny tolona ho amin'ny sehatra miroborobo mitondra mpandeha 200m avy amin'ny firenena 150 mahery mamorona asa an'arivony.